Kusiyanisa Grating - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
(Total 24 Products for Kusiyanisa Grating)
900 Grooves 12.7mm mativi 500nm Kusiyanisa Kukwirisa
Muenzaniso Nha.: RP-DG900
Ndege Kusiyanisa Grating ne 900 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Saizi: 12.7mm x 12.7mm Wavelength: 300nm kusvika 900nm Makoronga (Mutsara / mm): 900L / mm Yakapenya Wavelength: 500nm Blazed Angle: 13 dhigirii Bvisa Aperture: 90%
600 Grooves 12.7mm mativi 300nm Kusiyanisa Kukwirisa
Muenzaniso Nha.: RP-GSDG
Ndege Kusiyanisa Grating ne600 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Saizi: 12.7mm x 12.7mm Wavelength: 300nm kusvika 900nm Makoronga (Mutsara / mm): 600L / mm Yakapenya Wavelength: 500nm Blazed Angle: 5.1 dhigirii Bvisa Aperture: 90%
150 Grooves 12.7mm 500nm Dhizaini Kukwira
Muenzaniso Nha.: RP-F5DG
Ndege Kusiyanisa Grating ne 150 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Saizi: 12.7mm x 12.7mm Wavelength: 300nm kusvika 1000nm Makoronga (Mutsara / mm): 150L / mm Yakapenya Wavelength: 500nm Blazed Angle: 2.1 dhigirii Bvisa Aperture: 90%
300 Grooves 12.7mm 500nm ndege Kusiyanisa Grating
Muenzaniso Nha.: RP-DGP
Ndege Kusiyanisa Grating ne 300 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Saizi: 12.7mm x 12.7mm Wavelength: 300nm kusvika 1000nm Makoronga (Mutsara / mm): 300L / mm Yakapenya Wavelength: 500nm Blazed Angle: 4.3 dhigirii Bvisa Aperture: 90%
1200 Grooves 12.5x25mm 500nm ndege Kusiyanisa Grating
Muenzaniso Nha.: RP-DFW
Ndege Kusiyanisa Grating ne1200 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Kukura: 12.5mm x 25mm Wavelength: 400nm kusvika 1000nm Grooves (Mutsara / mm): 1200L / mm Yakapenya Wavelength: 500nm Blazed Angle: 17.4 dhigirii Bvisa Aperture: 90%
1200 Grooves 30mm square 750nm Dhizaini Kukwira
Muenzaniso Nha.: RP-DG1200
Ndege Kusiyanisa Grating ne1200 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Kukura: 12.5mm x 25mm Wavelength: 400nm kusvika 1200nm Grooves (Mutsara / mm): 1200L / mm Yakapenya Wavelength: 750nm Blazed Angle: 26.7 dhigirii Bvisa Aperture: 90%
600 Grooves 30mm 500nm Dhizaini Kukwira
Muenzaniso Nha.: RP-1250G
Ndege Kusiyanisa Grating ne600 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Kukura: 30mm x 30mm Wavelength: 300nm kusvika 1000nm Makoronga (Mutsara / mm): 600L / mm Yakapenya Wavelength: 500nm Blazed Angle: 8.6 dhigirii Bvisa Aperture: 90%
1200 Grooves 12.7mm square 750nm Dhizaini Kukwira
Muenzaniso Nha.: RP-23DG
Ndege Kusiyanisa Grating ne1200 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Saizi: 12.7mm x 12.7mm Wavelength: 400nm kusvika 1200nm Grooves (Mutsara / mm): 1200L / mm Yakapenya Wavelength: 750nm Blazed Angle: 26.7 dhigirii Bvisa Aperture: 90%
1200Grooves 12.5 x 25mm 750nm Kusiyanisa Grating
Muenzaniso Nha.: RP-G3DF
Ndege Kusiyanisa Grating ne1200 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Kukura: 30mm x 30mm Wavelength: 400nm kusvika 1000nm Grooves (Mutsara / mm): 1200L / mm Yakapenya Wavelength: 500nm Blazed Angle: 17.4 dhigirii Bvisa Aperture: 90%
600Grooves 12.5 x 25mm 500nm Kusiyanisa Grating
Muenzaniso Nha.: RP-625D
Ndege Kusiyanisa Grating ne600 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Kukura: 12.5mm x 25mm Wavelength: 300nm kusvika 1000nm Makoronga (Mutsara / mm): 600L / mm Yakapenya Wavelength: 500nm Blazed Angle: 8.6 dhigirii Bvisa Aperture: 90%
150 Grooves 25mm 500nm Dhizaini Kukwira
Muenzaniso Nha.: RP-150DG
Ndege Kusiyanisa Grating ne 150 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Kukura: 25mm x 25mm Wavelength: 300nm kusvika 1000nm Makoronga (Mutsara / mm): 150L / mm Yakapenya Wavelength: 500nm Blazed Angle: 2.1 dhigirii Bvisa Aperture: 90%
1200 Grooves 12.7mm square 250nm Diffraction Grating
Muenzaniso Nha.: RP-G12
Ndege Kusiyanisa Grating ne1200 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Saizi: 12.7mm x 12.7mm Wavelength: 200nm kusvika 900nm Grooves (Mutsara / mm): 1200L / mm Blazed Wavelength: 250nm Blazed Angle: 8.6 dhigirii Bvisa Aperture: 90%
1200Grooves 12.5 x 25mm 250nm Diffraction Grating
Muenzaniso Nha.: RP-12GD
Ndege Kusiyanisa Grating ne1200 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Kukura: 12.5mm x 25mm Wavelength: 200nm kusvika 900nm Grooves (Mutsara / mm): 1200L / mm Blazed Wavelength: 250nm Blazed Angle: 8.6 dhigirii Bvisa Aperture: 90%
1200 Grooves 50mm 500nm Kusiyanisa Kukwirisa
Ndege Kusiyanisa Grating ne1200 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Kukura: 50mm x 50mm Wavelength: 400nm kusvika 1000nm Grooves (Mutsara / mm): 1200L / mm Yakapenya Wavelength: 500nm Blazed Angle: 17.4 dhigirii Bvisa Aperture: 90%
600 Grooves 50mm 300nm Dhizaini Kukwira
Muenzaniso Nha.: RP-653D
Ndege Kusiyanisa Grating ne600 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Kukura: 50mm x 50mm Wavelength: 300nm kusvika 900nm Makoronga (Mutsara / mm): 600L / mm Yakapenya Wavelength: 300nm Blazed Angle: 5.1 dhigirii Bvisa Aperture: 90%
Muenzaniso Nha.: RP-G
Ndege Kusiyanisa Grating ne1200 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Kukura: 50mm x 50mm Wavelength: 400nm kusvika 1200nm Grooves (Mutsara / mm): 1200L / mm Yakapenya Wavelength: 750nm Blazed Angle: 26.7 dhigirii Bvisa Aperture: 90%
1200 Grooves 12.7mm 500nm Kusiyanisa Grating
Ndege Kusiyanisa Grating ne1200 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Saizi: 12.7mm x 12.7mm Wavelength: 400nm kusvika 1000nm Grooves (Mutsara / mm): 1200L / mm Yakapenya Wavelength: 500nm Blazed Angle: 17.4 dhigirii Bvisa Aperture: 90%
1200 Grooves / mm 32mm holographic diffraction nesefa
Holographic Concave Grating ine 1200 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Kukura: 32mm x 32mm Wavelength: 190nm kusvika 900nm Makoronga (Mutsara / mm): 1200L / mm
200 Grooves / mm 48mm Dia Flat Munda Concave Grating
Flat Munda Concave Grating ne 200 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Dhayamita: 48mm Wavelength: 200nm kusvika 800nm Grooves (Mutsara / mm): 2 00L / mm
217 Grooves / mm 48mm Dia Flat Munda Concave Grating
Flat Munda Concave Grating ine 217 Grooves. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Dhayamita: 48mm Wavelength: 400nm kusvika 950nm Makoronga (Mutsara / mm): 217 L / mm
Kusiyanisa Grating Kusiyanisa Gratings Ndege Kusiyanisa Grating Kusiyanisa Grating Kuenzana Angle yekusiyanisa Grating Kutapukirwa Kusiyanisa Grating Kusiyanisa Muganhu Kutongwa Grating